RASMI: Ole Gunnar Solskjaer oo ku guuleystay abaal-marinta macallinka bisha Janaayo ee Premier League – Gool FM
RASMI: Ole Gunnar Solskjaer oo ku guuleystay abaal-marinta macallinka bisha Janaayo ee Premier League
(Manchester) 08 Feb 2019. Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku guuleystay abaal-marinta macallinkii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee Janaayo.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa maanta loo magacaabay macallinka bisha Janaayo ee horyaalka Premier League, sagaal kulan ayuu guul ku hoggaamiyey kooxda Man Utd 10 kulan oo uu leyliyey, halka kulanka kalena uu yahay barbaro tan iyo markii uu xilka kala wareegay Jose Mourinho.
Waxa uu macallinka reer Norway ee Ole loo gacan galiyey abaal-marintan kadib markii uu bishii Janaayo kooxda ku hoggaamiyey saddex guul iyo hal barbaro afartii kulan ee la ciyaaray bishaas horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa berri oo Sabti ah u safreysa naadiga Fulham haddii ay guul gaartana macallin Ole ayaa sii wadan doona guuldarro la’aantiisa, halka Man Utd ay saldhigan doonto kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
RASMI: Ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta goolka bisha Janaayo ee Premier League oo la shaaciyey… + SAWIRRO